ကိုဇာနည်မောင် အတွက်... ~ White Angel
11:02 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 14 comments
On Line ပေါ်မှာ တွေ့ပြီး ကျမနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေထဲမှာ “ကိုဇာနည်မောင်” ဆိုတဲ့ (သူ့ရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကို အချိန်ပြည့် ပွစိပွစိလုပ်တတ်သူ)အကိုတယောက်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးဝါသနာပါသူတယောက်လို့ ယူဆရတဲ့ ကိုဇာနည်မောင်ရဲ့(၃၉)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ထုံးစံအတိုင်း မွေးနေ့ပွဲလေးတခုလုပ်ပေးရင်း “မွေးနေ့ရှင် ကိုဇာနည်မောင်” အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြရအောင်လားရှင်...
ပုဇွန်ကင်(နတ်သမီး ကတော့ တရုတ်မတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ပါတီပွဲလုပ်ရင် အဲဒီလို ပုဇွန်တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကစ်တာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ)
မိန်းခလေးများအတွက် “မိုဂျီတို” ကောက်တေးလ်
ပူစီနံရွက်နဲ့ သံပုရာသီး အနံကိုသုံးပြီး သကြားနဲ့ရောထားတဲ့အတွက်
သောက်လိုက်ရင် ချိုပြီး သံပုရာရည်အရသာနဲ့ ပူစီနံအနံ့သင်းသင်းလေးရှိတဲ့
နွေရာသီမှာ အသောက်များတဲ့ “မိုဂျီတို”ကောက်တေးလ် ပါ..။
(၂.၀၉.၁၀)နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ရှင်အတွက်...မွေးနေ့ကိတ်
ယောက်ျားလေး ဆိုတာ အသက်(၄၀)မှ ဘဝ“စ”တာပါ ...ကျွန်တော်က အခုမှ(၃၉)နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ် လို့ အတိအလင်းကြေညာသွားတဲ့ ကိုဇာနည်မောင်အတွက် မွေးနေ့ကဒ်လေး..နဲ့အတူ...ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မွေးနေ့များကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း...
*(ဘလော့ဂ်ကို လာလည်ရင် ပွစိပွစိ သိပ်မလုပ်နဲ့ အကိုရေ...၊ ချစ်သူက နတ်သမီးကို မျက်မှောင်ကုတ်ပြီးကြည့်ကြည့်နေတာ...၊ ဘယ်နေ့ အဆူခံရမလည်းမသိဘူး၊ )
နတ်သမီးရေ...ပုဇွန်ဟင်းတွေ အမယ်စုံ အကုန်စားသွားတယ်....အစ်ကိုဇာနည်မောင်ရေ...ဟက်ပီးဘတ်ဒေးနော်...စားပြီးမှာ wish လုပ်တယ် ဒီညီမလေးကတော့....။
မနမ်းရေ အဟီး ပုစွန်မြင်ရင် ကိုးက၀ါးတီးဖွင့်လိုက် ရမှကျေနပ်တာ ပုစွန်ဆိုအရမ်းကြိုက် မြင်ရင် မနနိုင်ဘူး။
ခုတော့ ဟီး မြင်သာမြင်မကြင်ရ .. အင်းဒါပေမယ့် ဒီမှာအမြင်နဲ့စားသွားတယ် အိမ်ပြန်ချက်စားဦးမှ
ဒါပေမယ့် ပုစွန်ကဈေးကြီးတယ် .. အဟဲ
မွေးနေ့ရှင်ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ဒါနဲ့ 40မှဘ၀စတယ်ဆို တော့ ခုဟာက စသေးဘူးပေါ့နော်.. အဲတော့ ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်... ကိုးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဘိုးကြီးထင်နေတာ.. ကျောင်းသားငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့နေရတော့လေ. ဟီး
စားသောက်စရာတွေက တကယ်ကို ဂလု စေတယ်ဗျာ
မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးသူရော ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ဘဝစဖို့ ၁ နှစ်တောင်မှ လိုသေးတာပဲနော်..အနော်ဆို အခုမှ ခရေးရေးပေါ့...ဟီး
အယ်..ပုဇွန်ကအကြိုက်ဆုံးပဲး)) အနောက်တိုင်းပုဇွန်ကို ပိုနှစ်သက်တယ်..
မွေးနေ့ရှင် ကိုဇာနည်ရေ မွေးနေ့ပွဲလုပ်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်ထင်တယ်..။ အခုလို မွေးနေ့ပွဲလေးရောက်လာမိလို့လည်း မွေးနေ့ရှင် အသက်ရှည်ပြီး အနာရောဂါကင်းကင်းနဲ့ ဘ၀မှာ မျှော်လင့်သမျှတွေဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်..
မွေးနေ့ရှင်ကိုဇာနည်မောင် ဘ၀ စတော့မှာ ဆိုတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဖန်ဆင်းရှင်နတ်သမီးကိုလည်းကျေးကျေးပါ။ စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ ပုဇွန်ဟင်းတွေ အတွက်ပေါ့။ (ကိုဇာနည်မောင့် မဟေသီလောင်း က တော့ ကြည့်နေတယ်နော်)
မွေးနေ့ရှင်ကို ဆုတောင်းပေးရင်း ပုဇွန်တွေဝါးသွားတယ်
တူမဖြစ်သူ နတ်သမီးလေးမွေးနေ့မှာတော့ ပုဇွန်ထက်ကြီးတဲ့ မိချောင်းကောင်လုံးကင် ပို့ပေးပါ့မယ်
၃၉နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာများကို ရေးသားနိုင်ပါစေ။
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ လိုရာ ဆန္ဒအားလုံးပြည့်ဝပါစေ။
ရောက်လာတယ် နတ်သမီးရေ ဒါပေမယ့် South Africa Red Wine မပါတော့ တခြားဝိုင်တွေသောက်ရမှာ သိပ်ပြီး လျှာမလေးဖြစ်နေတယ် ............. :D ..... အခုလို မွေးနေ့လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ မွေးနေ့အတွက် ဆိုပြီး ၂၂.၇.၂၀၁၀ ( ကြာသာပတေးနေ့ ) က ကတ္တီပါ လမ်းခွဲနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အချစ်ဟောင်းက ဂျင်းဘောင်းဘီတထည်နဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တလုံးမွေးနေ့ လက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်လာတယ် ။ ပြီးတော့ မွေးနေ့မှာ နယ်သာလန်က ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ ဘဲကလေးတွေကို အစာသွားကျွေးတော့လည်းသူက ဖုန်းနဲ့လိုက်လာပြီးနှောက်ယှက်နေသေးတယ် ...... ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးး ................... သူ့ကို့ သနားလို့ ကတ္တီပါ လမ်းခွဲနည်းနဲ့လမ်းခွဲပေးလိုက်မိပါတယ် ... အခုမှ ဘယ်လိုပြန်ခွါချရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီ ........... :) ...... နောက်အခါတွေဆိုရင် http://pyichittharmaung.blogspot.com ကိုအလည်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် နတ်သမီးရေ .....
ဟင့်.. ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးလာဖတ်မိတာကိုက ကံဆိုးလွန်းပါတယ်လေ... :P
Blogspotမှာ Comment ပေးလို့ရတုန်းလေး အပြေးရောက်ခဲ့ပါတယ် ညီမရေ..။ စာတွေဝင်ဖတ် ဖြစ်ပေမယ့် Comment ပေးလို့မရဖြစ်နေတာလေ။
Comment ပေးလို့ရပြီမို့ လင့်ခ်လည်း ချိတ်ထားလိုက် ပြီ။ ကိုဇာနည်မောင် မွေးနေ့အတွက်ပါ ဆုမွန်ချွေသွား လိုက်ပါတယ်နော်။
The pronunciation for "Mojito" cocktail is "Mo-He-To".
It isaSpanish word and "J" is pronounced as "H".
Just to correct the usage.
ရေးတဲ့အချိန်မှာတော့ “မိုဂျီတို” လို့ရေးပြီး ဖတ်တဲ့အချိန်မှာ “မိုဟိတို” လို့ဖတ်ရပါတယ်...